स्वस्थ रहन कस्तो खाना खाने ? « Deshko News
स्वस्थ रहन कस्तो खाना खाने ?
एउटा उखान छ– ‘हामी दाँतले आफ्नै चिहान खनिरहेका हुन्छौं ।’ यसको सार हामीले खाने खानाले स्वास्थ्यमा गर्ने असर र प्रभाव नै हो । तसर्थ खाना खाँदा जिब्रोकोे स्वादका लागि होइन, शरीरको स्वास्थ्यका लागि हेक्का राख्नुपर्छ ।
हृदयाघात निम्त्याउने एयाथिरोस्किलोरोसिस ९मुटुमा रगत पु¥याउने नशाका रोग, मस्तिष्काघात, आँखाको दृष्टि गुम्न कारक मानिएको म्याकुलर डिजिज, क्यान्सर र समयअगावै बुढ्यौली निम्त्याउने रोगको प्रमुख कारक अनवरत रुपमा हुने आन्तरिक सुजन वा क्रोनिक इन्फ्ल्यामेसन हो । त्यस्तो आन्तरिक सुजन भगाउने खाना गाढा हरियो सागसब्जी, फलफूल, गेडागुडी, सखरखण्ड, जैत्नको तेल, हर्दी, साल्मन र सार्डिन प्रजातिका माछा, सोयाबिन (तोफुलगायत) होल ग्रेन आदि हुन् ।
खानामा बटर चिज, भेजिटेबल ओयल र चिनीको मात्रा धेरै भएका खाना नियन्त्रण गर्नुपर्छ । शरीरमा दैनिक रुपमा भइरहने विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाले अक्सिजन फ्रि–¥याडिकल पैदा गर्छन् जुन शरीरका लागि अन्त्यन्तै हानिकारक हुन्छन् । यस्ता ¥याडिकलले विभिन्न दीर्घरोग नित्म्याउँछन् । तसर्थ बाह्य तत्व वा खानाबाट प्राप्त हुने एन्टिअक्सिडेन्ट जस्तै भिटामिन–ए र बिटा–क्यारोटिन, भिटामिन–ई र भिटामिन–सीको पनि नियमित सेवन गर्नुपर्छ ।
मुटुको स्वास्थ्यका लागि जस्तै जौ, मकै, गहुँ, कोदोलगायत फाइबरयुक्त खाद्यसामग्री उपयोगी हुन्छन् । तरकारीमा गेडागुडी, सिमी, केराउ, सोयाबिन आदि र फलफूलमा स्याउ, अम्बा, सुन्तला, मेवा, अंगुर, अनार, भुईंकटहरलगायत पर्छन् । त्यस्तै तरकारीमा अन्य कुरिलो, ब्रोकाउली, तामा, बोडी, बन्दाकोभी, मुला, सलगम, लसुन ९२–३ कोसा दैनिक काँचो वा भुटेर सेवन गर्दा मुटुलाई फाइदा पु¥याउँछ ।
मुटुको रोग नलागेका व्यक्तिमा माछा (मूलतः सार्डिन र साल्मन प्रजातिका) प्रयोग गर्नुु राम्रो हुन्छ भने मुटु रोग लागिसकेकालाई फिस ओयलको दैनिक सेवन लाभकारी हुन्छ । त्यसरी माछा सेवन गर्दा हप्तामा दुई वा तीनपटक घटीमा पनि सेवन गर्नुपर्छ । पेय पदार्थमा भने डिक्याफिनेटेट चिया, सबै प्रकारका फलफूलका रस, हर्बल चिया र तरकारीको सुप प्रभावकारी हुन्छ । अण्डाको सेतो भाग र दहीलाई पनि मुटुमा उपयोगी मानिएको छ ।
काठमाडौं, पौष २४ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरिबाट पुस महिनामा संकलित ११ सय ४६ पोजेटिभ
एजेन्सी, मंसिर २० भारतमा एकै दिन १७ जनामा काेभिडकाे नयाँ भेरियन्ट ओमिक्राेन भाइरस देखिएकाे छ